Muuqaalkan cabsida leh wuxuu muujinayaa Bill Hader oo isu beddelaya ku dayasho Tom Cruise - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Muuqaalkan cabsida leh wuxuu muujinayaa Bill Hader oo isu beddelaya ku dayasho Tom Cruise - BGR
Muuqaalkan cabsida leh wuxuu muujinayaa Bill Hader oo isu beddelaya ku dayasho Tom Cruise - BGR
Muuqaalkan waxaa laga yaabaa in loo tixgeliyo fiidiyowga ugu hooseeya ee aan ka helo ee aan arkay ilaa hadda. Waxaan kuu soo jiidanaynaa xijaabta sare ee maqaalkan, oo muujinaya waraysi hore oo lala yeeshay Bill Hader Late Night with David Letterman . Bill wuxuu fursad u helayaa inuu ku muujiyo xirfadiisa cajiibka ah ee daabacan - ka dibna Abuuraha muuqaalka muuqaalka kore ee kor ku xusan wuxuu adeegsadaa hibadooda xirfadeed ee sayniska ah si uu si aan kala sooc lahayn ugu beddelo wejigiisa Bill wejiga Tom Cruise, ka dibna Seth Rogen ayaa galay Wuxuu ku daydaa iyaga wakhtiyo kala duwan oo filimka ah.
Saameynta oo dhan waa ... wow, si fiican, fiiri.
Haddii aad rabto inaad hore ugu dhaqaaqdo muuqaalka halka labada waji isku beddelka ay ka dhacaan, tan koowaad waa u dhaqaaqista Tom Cruise. Way dhakhso badan oo dhakhso badan, laakiin waa wax badan oo qurux badan helitaanka sekadaha 55, in kasta oo Tom dareenkiisa dhabta ah ee ra'yiga Bill uu runtii bilaabmayo agagaarka baararka daqiiqadaha 27. Haddii markaa markaa aad rabto inaad aado marxaladda Seth Rogen, aragtida Bill ee isaga, iyo sidoo kale isbedelka wejiga, wuxuu bilaabaa inuu wareejiyo daqiiqada xigta, ilbidhiqyada 55.
Fiidiyowgu waa shaqada Ctrl Shift Face, kaas oo ah magaca kanaalka YouTube-ka halkaas oo aad ka heli karto tiro ka mid ah fiidiyowyo aad u qoto dheer oo qotodheer.
Eray digniin ah: Ha dhex gelinin faallooyinka wax ka soo baxa Twitter-ka ee looga jawaabayo muuqaalkan, maadaama tani ay kaa dhigeyso inaad dareento walwal ku saabsan sirdoonka dadka iyo mustaqbalka bini-aadamka (Waan ku eegeynaa, kuwa dhexdiina ku fikiray in filimkani yahay mid dhab ah oo aad la yaabtay haddii Bill uu ahaa nooc metamorph ah).
Waxa kale oo ay tahay sii wadida isbeddellada aan soo raacnay in yar oo daawashada ay ka sii fiicnaaneyso. Saxnaanta tikniyoolajiyadda qoditaanka waxay sii kordheysaa iyadoo la adeegsanayo boodhadh iyo soohdin, sida aan halkan ku cadaynay oo leh tusaalooyin dhowaan oo ay ku jiraan fiidiyooyin caan ah oo been abuur ah sida Kim Kardashian, Mark Zuckerberg iyo inbadan.